यो एक Windows ल्याप्टप लागि तपाईंको म्याक स्वाप गर्न समय छ? - समाचार नियम
यो एक Windows ल्याप्टप लागि तपाईंको म्याक स्वाप गर्न समय छ?
एक दशक भन्दा पहिले एलेक्स Hern म्याक पीसी देखि सरेका र फिर्ता देख्यो कहिल्यै. तर नयाँ मैकबुक प्रो गरेको त त्यो अन्तमा फेरि स्विच परीक्षा हुन सक्छ धेरै महंगा?
शीर्षक यो लेख “यो एक Windows ल्याप्टप लागि आफ्नो म्याक स्वाप गर्न समय छ?” एलेक्स Hern द्वारा लेखिएको थियो, शनिबार7जनवरी मा theguardian.com लागि 2017 08.00 UTC
म एक दशक लागि एक एप्पल प्रयोगकर्ता भएको छु, म एक मर्मत 17in Powerbook पछि छानिएको त्यसबेलादेखि 2005 मेरो बिरामी परेका Windows XP बक्स प्रतिस्थापन गर्न. तर गत महिना, एप्पल लगभग यसको सबैभन्दा महंगा नयाँ मैकबुक पेशेवरों घोषणा पछि 15 वर्ष, म पहिलो पटक मेरो निर्णय पुनः विचार र, पछिल्लो केही हप्ता, म एक Windows पीसी मा फिर्ता भएको छु.
म सधैं एक म्याक प्रयोगकर्ता थियो. मेरो पहिलो तीन कम्प्युटर पीसी थिए, हुनत म मा हुर्केको घरमा एक दुःखकष्ट थियो, पावर म्याक Performa घृणा. मेरो किशोरावस्था मा स्विच लागि मेरो कारण एकदम सरल थिए: म कम र कम पीसी खेल खेल्दै गरिएको चाहन्छु, र खर्च मेरो आइपड लिङ्क गरिएका लाइब्रेरी व्यवस्थापन गर्न मेरो कम्प्युटर प्रयोग समय को मात्रा वृद्धि. म ती को switchers थियो, एप्पल संगीत खेलाडी को शान गरेर हैरानी र उनीहरूको पूर्ण डेस्कटप अपरेटिङ सिस्टम मा प्रवेश लिन विश्वस्त.
ल्यापटप सस्तो थिएन, तर यो मेरो विभाजित आमाबाबुको घरहरू बीच धेरै सजिलो shuttling बनाएका. र म वर्ष बनाइयो चाहन्छु पीसी खेल को पूर्ण पुस्तकालय खेल्न सक्षम रहेको सम्झना गर्दा, यो एक रोमाञ्चक समय म्याक ओएस संसारमा सार्दा गर्न थियो. थप, Warcraft को विश्व क्रस-मंच थियो, जो म एक असल गर्दा लागि आवश्यक सबै खेल थियो.
दस वर्ष मा, म एक एकदम पूर्वनिर्धारित एप्पल प्रयोगकर्ता हुँ. म मेरो छैटौं iPhone मा छु, दोस्रो आईप्याड र तेस्रो म्याक; म घर मा एक स्याउ वी, स्याउ मेरो डेस्कटपमा ब्रांडेड किबोर्ड, र पनि एउटा स्याउ एए ब्याट्री चार्जर, दिन देखि जब तिनीहरूले गरे.
तर एक को जुम्ल्याहा मुक्काहरु पाउंड को Brexit-नेतृत्व मूल्यह्रास, र एप्पल कम से कम संग मैकबुक पेशेवरों को एक नयाँ दायरा जारी धमाका-लागि-आफ्नो-Buck हाल स्मृति मा, मलाई दुई पटक सोच्न बनाएका. मेरो आवश्यकता लागि पर्याप्त हुनेछ भनेर सस्ता म्याक, भण्डारण स्पेस 512GB र राम को 16GB संग एक 13in मैकबुक प्रो, मा मा राम्रो भन्दा £ 2,000 आउँछ, अहिलेसम्म बल्लतल्ल थप शक्तिशाली यो ठाँउ गर्नुपर्छ मिसिन भन्दा छ, एक 15in रेटिना मैकबुक चार वर्ष पहिले देखि प्रो समय मा बस भन्दा £ 1,500 खर्च भनेर.
त्यसैले म स्वीच. गत महिना लागि, म प्रयोग गरिएको छ पुस्तक सतह, शीर्ष-को-को-लाइन ल्यापटप द्वारा बिक्री, सबै मान्छे को, माइक्रोसफ्ट.
यो एउटा अनुभव भएको.
माइक्रोसफ्ट सतह बुक तस्वीर: रक्षक लागि शमूएल गिब्स
मेरो आशा मा जा अनिश्चित थिए. मलाई थाहा म अन्तिम यसलाई प्रयोग देखि विन्डोज मौलिक विकसित छ, को XP युग मा फिर्ता, र पनि म रिसाएर यो प्रयोग अन्तिम समय देखि परिवर्तन भएको छ, छिट्टै को प्रक्षेपण पछि विन्डोज 8.1. सञ्चालन प्रणाली को वर्तमान नयाँ संस्करण, विन्डोज 10 (confusingly, केवल एक संस्करण पछि भन्दा 8.1; कथा धेरै विकासकर्ताहरूले विन्डोज संकेत कोड लेखेका जान्छ 95 र 98 "9 *" को रूपमा, वास्तविक विन्डोज अर्थ9अनुकूलता तोड थियो), सामान्यतया एक राम्रो कुरा मानिन्छ. यो संस्करण को नयाँ विन्डोज अनुभव meshes 8 पुरानो शैली डेस्कटप अघिल्लो संस्करण भन्दा बढी elegantly संग, गहिरो नीडिंत मेनू मा cruft को अझ consigning र पहिलो-समय प्रयोगकर्ताका लागि slick अनुभव भेटी गर्दा.
म पनि मिसिन द्वारा आशा दिइएको थियो. सतह को पहिलो संस्करण संग एक अजीब सुरु फिर्ता मा पछि 2012, त्यसपछि एक iPad प्रतियोगी रूपमा पिच, माइक्रोसफ्ट छ विन्डोज पीसी को सबै भन्दा राम्रो निर्माताहरु मध्ये एक भएको छ. सतह बुक एक स्वादिष्ट मिसिन छ, एक मैकबुक प्रो-वर्ग ल्यापटप रूपमा तर प्रयोगका को पूरै नयाँ दायरामा यसलाई खोल्दछ एक पूर्ण अलग गर्न सकिने टचस्क्रीन संग masquerading.
यो माईक्रोसफ्टका यसको हार्डवेयर साझेदार संग सम्बन्ध आउँदा सतह मिसिन गुणस्तर समस्या भएको छ, Microsoft Windows लागि लाइसेन्स शुल्क संग लाखौं सामग्री raking हुन आशा गर्न जो tended, बरु हार्डवेयर विनिर्माण देखि लाभ को लागि उनलाई साथ सीधा प्रतिस्पर्धा भन्दा. तर अहिले, कम्पनी बजार को किनारा मा बस्ने सामग्री भएको छ, शक्ति प्रयोगकर्ताको लागि आला उपकरणहरू बनाउन.
कि सबै हुँदाहुँदै पनि, म trepidation को एक निष्पक्ष राशि थियो. मृत्युको नीलो स्क्रीन को सम्झनाहरु, चालक संघर्ष को, बाहिर मेरो रजिस्ट्री एक मालवेयर संक्रमण पछि प्रणाली सफाई र बहाल, मिलाउ गर्न कठिन, रूपमा देखि प्रविधी संसारको महान् शैतानले रूपमा माइक्रोसफ्ट को मेरो युवा सामान्य hangover छ. Zuckerberg ले 2010s छ रूपमा, गेट्स 1990 को दशक थियो: कहिल्यै वर्तमान, पेशेवर amoral, र अविश्वसनीय, unflappably, सफल.
तर गेट्स गइसकेको छ, Ballmer छ रूपमा. यो अब स Nadella गरेको कम्पनी हो, वा आज को फेसबुक - - र यो पुस्ता को माइक्रोसफ्ट को 90 को दशक को माइक्रोसफ्ट सबै छ छैन: नम्र, शान्त, यसलाई जित्न सक्छौं जहाँ सफलता र भागीदारी सामग्री जहाँ यो सक्दैन, र गेट्स रूपमा प्रतियोगिहरु संग काम को रूपमा गर्व तिनीहरूलाई क्रशिंग को थियो. छोटकरीमा, यसलाई म साथी भएर विचार सक्ने एक माईक्रोसफ्टका. यो कि खराब हुन सकेन.
स्विच बारेमा खराब कुरा, यो बाहिर जान्छ, स्विच छ.
म tautological हुन प्रयास छैन छु. तर म वास्तवमा यो परिवर्तन बनाउन अनुभवी गर्नुभएको unpleasantness को थोक विन्डोज गर्न निहित भएको छैन, तर छ या त किनभने दुई सञ्चालन प्रणाली बीच मतभेद को बारेमा आउन, वा अझै पनि वास्तवमा अप रही र एक दिन देखि चलिरहेको मा कठिनाइ.
केही समस्याहरू रूपमा सरल छन्, तर तैपनि infuriating, विभिन्न किबोर्ड सर्टकटहरू रूपमा. मांसपेशी स्मृति एक जीवनकालमा आदेश-ठाउँ स्पटलाइट ल्याउँछ कि मलाई भन्नुभयो छ, जो म मेरो Mac मा कार्यक्रम खोलियो मुख्य तरिका हो. Windows मा नै सर्टकट 10 बस विन्डोज प्रमुख मारा छ, जो invokes Cortana, माईक्रोसफ्टका ऐ सहायक, त्यसपछि कार्यक्रम को नाम टाइप तपाईं खोल्न चाहनुहुन्छ.
यो सिर्फ सबै त … नीलो. तस्वीर: शान्नोन Stapleton / रयटर्स
यस्तै बेमेल विन्डो व्यवस्थापन जस्तै क्षेत्रमा देखा, alt-ट्याब व्यवहार, र कार्यक्रम स्थापना. यसलाई जो राम्रो छ भन्न एक पुस छ (म एक स्थापना चलिरहेको बस अनुप्रयोग फोल्डरमा एउटा अनुप्रयोग तान्ने भन्दा कम सुरुचिपूर्ण छ कि कायम हुनत), तर तपाईं प्रयोग गरिरहनु भएको whichever, तपाईं आफैलाई पुन: शिक्षित नभएसम्म अन्य खराब हुनेछ.
त्यो म गनगन प्रशस्त छैन भन्न होइन, हुनत.
त्यो स्पटलाइट / Cortana बेमेल, उदाहरणका लागि? यो त खराब भएको थियो, विन्डोज macs मा आदेश कुञ्जी को स्थानमा alt प्रमुख म्याप बाहेक, र alt-स्पेस भाषा स्विच लागि Windows सर्टकट छ, त्यसैले हरेक समय म स्पटलाइट आह्वान गर्न असफल भयो, म गल्ति मेरो कम्प्युटर मा स्थापित भएको थियो भाषा स्विच हुनेछ, एक अमेरिकी अंग्रेजी लेआउट मेरो किबोर्ड रिसेट.
एउटा कष्टप्रद समस्या थियो. बुरा म वास्तवमा दुई भाषामा पहिलो स्थानमा सतह बुक मा सेट छैन गर्नुभएको थियो. र अझै, तल दायाँ मा hovering, स्थायी, एक सानो बक्स म बेलायत अंग्रेजी वा अमेरिकी अंग्रेजी चलिरहेको थियो कि देखाउन थियो, दृष्टि मा कुनै विकल्प यसलाई हटाउन.
अन्त मा, म समस्या निवारण सल्लाह लागि ट्विटर बारी थियो. हामी कुनै अमेरिकी अंग्रेजी भाषा सेट अप थियो किनभने अमेरिकी अंग्रेजी भाषा हटाउन कुनै विकल्प थियो कि निर्धारित. त्यसैले यसलाई हटाउन, म के थियो सबै भाषा मेनु जान थियो, अंग्रेजी थप्न (संयुक्त राज्य अमेरिका) एक विकल्पको रूपमा, र त्यसपछि अंग्रेजी हटाउन (संयुक्त राज्य अमेरिका) एक विकल्पको रूपमा. मलाई थाहा छ. तर यो काम, त्यसैले म गुनासो गर्ने छु.
म पनि म्याक ओएस मा एक महत्वपूर्ण आँखा धेरै समान त्रुटिहरू प्रकट हुनेछ दृढ सजग छु. म्याक प्रयोगकर्ता, विशेष दीर्घकालीन, अलिकति jaundiced, म्याक प्रयोगकर्ता, लामो एप्पल गरेको erstwhile मार्केटिङ नारा को खोक्रो हाँसो र आव्हानले परिचित छन् केहि जोसका कार्य केवल छैन जारी रूपमा "यो केवल काम गर्दछ". वास्तबमा, कि वाक्यांश विडंबना धेरै समयमा uttered गरिएको छ यो साँच्चै एप्पल लागि प्रतिस्पर्धी लाभ को एक ठाउँ बाट आएको भनेर बिर्सन सजिलो छ कि.
त्यो फाइदा धेरै हदसम्म वर्षौंदेखि कमजोर हुँदै गइरहेको छ, माइक्रोसफ्ट ठाडो एकीकरण को सुख मा cottoned छ रूपमा, प्लग र सामान प्ले, र स्तर-अनुरूप व्यवहार.
तर सम्पूर्ण. बाह्य माउस मा Plugging (एक utterly मानक लेजर माउस माइक्रोसफ्ट बनाएको), म मा निर्मित ट्रयाकप्याड को कि मेल पुस्तक पाङ्ग्रा मा स्क्रोल व्यवहार उल्ट्याउन सक्ने फेला पार्न नाराज थियो. यो तपाईं मिसिन फेर्न व्यवहार relearn छ एक कुरा हो, अर्को तिनीहरूलाई तपाईं एक परिधीय प्लग हरेक समय पुन: सिक्न छ छ.
पछि निरर्थक गुगलिङ को एक घण्टा बारेमा - अप्रचलित उपयोगिता स्थापना धेरै सुझावहरू सहित, रजिस्ट्री Hack, या Windows को एक पहिले संस्करण फिर्ता रोल - र म चाहन्थे के गर्न बाटो पत्ता. म मेरो माउस लागि चालक डाउनलोड थियो.
यो सिर्फ मा मैकबुक प्रो संग काम गर्दछ ... स्टीव रोजगार 2008. तस्वीर: जस्टिन सुलिवान / Getty छवियाँ
तपाईं जवान हुनुहुन्छ भने, एक म्याक प्रयोगकर्ता, वा विशेष प्राविधिक छैन, कि धेरै अर्थ हुन सक्छ. चालक सञ्चालन प्रणाली कसरी हार्डवेयर काम गर्न बताउने सफ्टवेयर को सानो टुक्रा हो, यो माउस जस्तै सरल सामान गर्न ग्राफिक्स कार्ड जस्तै जटिल घटक देखि. तर आवश्यकता, कि हैन, सामान लागि चालक को एप्पल द्वारा कि प्रतिस्पर्धी पुस एक ठूलो भाग थियो, जो प्रिन्टरहरू जस्तै प्रयोग सबैभन्दा सामान्यतः बाह्य थुप्रै लागि बाहिर--द-बक्स सुनिश्चित समर्थन को एक बिन्दु गरे, क्यामेरा र चूहों. स्टीव रोजगार यसो "यो केवल काम गर्छ", यो उहाँले बताइरहेका थिए कुरा क्रमबद्ध छ: माउस मा प्लग र केवल कार्य यो छ क्षमता.
एक आला व्यवहार सक्षम माउस लागि चालक स्थापना कुनै ठूलो कठिनाइ छ, तर अझै पनि यो मलाई सामान्य चिन्तित बाँकी. माइक्रोसफ्ट माउस र ल्यापटप दुवै गरे, अझै दुई मेरो हस्तक्षेप बिना सँगै तरिकाले खेल्न सक्षम थिए. मिसिन को पागल र बोल्ट यो खनाइ छैन केहि म छुटेका थिए थियो.
को शून्य छोएर
को माइक्रोसफ्ट 2016 एक विभाजित व्यक्तित्व छ. थुप्रै तरिकामा, को विभाजन नै यो पछिल्लो लागि थियो कि छ 20 वर्ष, निरन्तरता को लागि आफ्नो इच्छा र reinvention र प्राविधिक नेतृत्वको यसको इच्छा बीच. जहाँ कम्पनी सफल छ आज जहाँ कि बाद इच्छा ascendant छ, र सतह बुक एक अगाडी-देख माइक्रोसफ्ट को सबै भन्दा राम्रो उदाहरण तपाईंलाई फेला पार्न सक्छन् छ.
यो एक शानदार मेसिनको. सानो र शक्तिशाली, लामो ब्याट्री जीवन संग, यो एक ल्यापटप रूपमा प्रस्ट, तर यसको वास्तविक तागत तपाईं आफ्नो आधार देखि स्क्रिन undock गर्दा प्रकट गर्दै. भान्सा वरिपरि मेरो ल्यापटप बोक्न सक्षम रहेको साप्ताहिक दोकान गर्दा, यसलाई फिर्ता केही व्यञ्जनहरु डकिंग र माथि टाइप अघि, साँच्चै सुन्दर थियो.
एक Illustrator भइरहेको छैन, एक ग्राफिक डिजाइनर, वा एक ग्राफिक विचारक, एक लेखनी यसलाई मेरो ल्यापटप बाहिर पप र लेख्न सक्ने क्षमता छ कि उपयोगी कहिल्यै. तस्वीर: रक्षक लागि शमूएल गिब्स
दुर्भाग्यवश, सुन्दर सबै यो मेरो लागि थियो छ. एक साथ यो मेरो ल्यापटप बाहिर पप र लेख्न सक्ने क्षमता (धेरै सही) लेखनी कि उपयोगी कहिल्यै. केहि भने, यो किबोर्ड-र-टचप्याड कम्बो hefty कार्यहरू धेरै लागि कति कुशल अन्डरस्कोर गर्न सेवा.
म सतह बुक ल्यापटप मोडमा थियो जबकि टचस्क्रीन प्रयोग गर्न सक्ने क्षमता संग यस्तै अनुभव थियो. म बस धेरै गरेन, र अधिकांश समय म कहिले, यो भने म सकेजति हेर्न बस थियो.
कहिले काँही, को टचस्क्रीन सक्रिय खराब थियो. मेरो पहिलो खोल्ने समय विन्डोज मेल, म तिनीहरूलाई सङ्ग्रह गर्न बायाँ मेलहरू स्वाइप सक्ने सहयोगी popover देखाउँदै संग अभिवादन थियो. तर म बाहिर काम गर्न सकिएन कसरी: क्लिक गर्नुहोस् र तान्नुहोस्? टच प्याड मा स्वाइप दुई-fingered? जवाफ, पाठ्यक्रम, स्क्रिन सम्म पुग्न छ, र त्यो बाटो स्वाइप. यो छैन एक सर्टकट, स्क्रिन तपाईं पहिले नै किबोर्ड र माउस प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ एक डक मा छ विशेष यदि र.
सोही, धेरै संकर ल्याप्टप विपरीत, आधार बस किबोर्ड छैन: यो पनि दोस्रो ब्याट्री समावेश, र हार्डवेयर घटक को एक नम्बर एक असतत GPU सहित. (कि सेटअप को एक नकारात्मक: तपाईं गर्दा undocked ब्याट्री बाहिर स्क्रिन रन गरौं भने, तपाईं यो तपाईं अलग यसलाई चार्ज नगरेसम्म पुनः डक गर्न सक्नुहुन्छ, आधार अझै बाँकी केही शक्ति छ भने पनि).
पीसी मंगल छन्
यदि यो nitpicks एक लामो सूची जस्तै सुनिन्छ, यो किनभने छ … राम्रो, यो छ. बनाम म्याक विन्डोज भन्दा लडे गरिएका सबै अस्तित्व लडाई को लागि, त्यहाँ कुनै पनि महत्त्वपूर्ण स्तर मा दुई भेद सानो छ. यस प्लेटफर्ममा सौंदर्य र व्यक्तिगत प्राथमिकताहरू तर सबै मा converged छ. दुवै एक लक-तल स्टोर पावर प्रयोगकर्ताका बेवास्ता जो छ; दुवै वेब अनुप्रयोगहरू र मोबाइल-पहिलो डिजाइन को संसार मा सान्दर्भिकता लागि लडिरहेका छन्; दुवै आफ्नो काँध मा बसेर विगतका संस्करण को वजन महसुस.
तिमी किन व्याख्या गर्न मलाई सोधे भने, यो सबै बावजुद, म बरु माइक्रोसफ्ट देखि सतह बुक खरीद भन्दा मैकबुक प्रो को लागि तल मेरो पैसा राख्नुभएको (जो यो परीक्षण उपकरण loaned), म तपाईंलाई ठोस मेरो लागि पर्याप्त महसुस केही कारण दिन सक्छ.
म ओएस भर riddled विज्ञापन र क्रस-पदोन्नति को राशि द्वारा स्तब्ध भयो, सुरु मेनु अनुप्रयोगहरूका लागि विज्ञप्ति देखि, एक लगातार पप-अप गर्न कार्यालय को निःशुल्क परीक्षण भेटी 365.
म सामान्य मा ठोस तेस्रो पार्टी अनुप्रयोगहरू को paucity गरेर हैरानी थियो, र विशेष कुनै पनि राम्रो उपभोक्ता उत्पादकत्व सुइट को कमी द्वारा. जब सबै भन्दा साधारण सिफारिस, calendaring फोटो भण्डारण सेवाहरू लागि, "भर्खर गुगल वेब अनुप्रयोगहरू प्रयोग" छ, त्यहाँ भर्न एक प्वाल पर्खने हो (शायद हुनत सामान्य वेब अनुप्रयोगहरूको बस मेरो मन नपराइएको छ). यो म्याक देव दृश्य जस्तै महसुस गर्ने ठूलो कम्पनीहरु संग प्रतिस्पर्धा पूर्णतया विशेष अनुप्रयोगहरू बनाउने टोली भरिएको छ, जबकि विन्डोज devs थप आला उपयोगिता एक युद्ध सुरु गर्न चाहिने बिना जो विशेष आवश्यकता सेवा गर्न सामग्री छन्.
यस macbook प्रो अप £ 1,000 सतह बुक भन्दा अधिक महंगा छ. तस्वीर: डोमिनिक Lipinski / पीए
म एक स्मार्ट निद्रामा मोड को कमी मनपरेको, मेरो कम्प्युटर अर्थ केही उपयोगिता पृष्ठभूमिमा चलिरहेको थियो किनभने अक्सर समतल म बिहान यसलाई खोल्न जब हुनेछ.
म विशेष वर्ण टाइप मा कठिनाई घृणा, ellipses र एम-ड्यासहरू गर्न विदेशी महत्तव देखि. म एक विश्वव्यापी पेस्ट-रूपमा-सादा-पाठ सर्टकट को कमी घृणा, र म मेरो प्रेमिका पाठ लागि डेस्कटपमा iMessage पहुँचको शोकाकुल.
धेरै जसो, हुनत, म सानो irritations खडा सकेन, एक कम रिजोल्युसन एक एक उच्च रिजोल्युसन स्क्रिन देखि जब तान्नुभयो सही अनुकूल गर्न Chrome Windows को विफलता देखि, जब म यसलाई मेरो औंठी मेरो औंला भन्दा प्रयोग ट्रयाकप्याड गरेको नसक्नुको गर्न सही क्लिक गर्न.
म ती irritations विन्डोज अनुपम हुन् भनेर बहाना छैन, वा तिनीहरूले कुराहरू छैनन् पनि छ कि म समय संग छैन निश्चित सक्थे, प्रयास वा पुन शिक्षा. तर समस्या छ, तिनीहरूलाई ठिक यो मूल्य छैन: फरक सिर्फ त्यहाँ छैन.
त्यो तपाईं स्विच सोच हुनुहुन्छ साँचो whichever तरिका हो. तिमी मेरो समस्याहरू एक Windows प्रयोगकर्ता nodding साथ हुनुहुन्छ भने, म म्याक स्विच को एक महिना भित्र भनेर ग्यारेन्टी गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईं बस लामो रूपमा सूची छ छौँ. शायद एक दिन, एक वा अन्य मंच एक आज्ञा पालन नेतृत्व हुनेछ. केही प्रयोगमा अवस्थामा लागि, कि पहिले नै भयो गर्नुपर्छ: खेलाडीहरूलाई विन्डोज छ, जबकि iOS विकासकर्ताहरूले म्याक छ, दुई स्पष्ट उदाहरणहरू राज्य गर्न. तर अहिले, विशाल बहुमत लागि, त्यहाँ मा केहि छ भन्न गाह्रो छ.
बाहेक, पाठ्यक्रम, मूल्य लागि.
किनभने यी समस्या गौण हो, र माथि £ 1,000 को मूल्य फरक छैन. सतह बुक नयाँ मैकबुक प्रो जस्तै मूल्य वरिपरि छ, तर अन्य धेरै उच्च गुणवत्ता ल्याप्टप छैनन्: तपाईं सजिलै डेल गरेको एक्सपिएस दायरा वा एक comparably-specced मैकबुक भन्दा कम पाउण्ड सयौं लागि लेनोभो गरेको Thinkpads जस्तै मोडेल पत्ता लगाउन छौँ.
मलाई लागि, नयाँ म्याकको लागि बचत चार वर्ष संग, राम्रो क्रेडिट, र डिजिटल दाह गर्न जोखिम-अनिच्छा, यो मलाई थाहा के संग रहन नाक मार्फत तिर्ने लायक छ. तर यो तपाईं को लागि मामला हुन सक्छ.
स्विच एक panacea छैन, पूर्व म्याक प्रयोगकर्ताहरूको लागि कष्टप्रद एक बिट भन्दा राम्रो केहि हुनेछ भन्ने कुनै विन्डोज कम्प्युटर - - र बाहिर कुनै चाँदी बुलेट त्यहाँ तर पहिले तपाईं पनि आत्मसन्तुष्ट प्राप्त, म एक महसुस गरेका नै अन्य तरिका राउन्ड साँचो हो. अन्ततः, तिनीहरूले भएको रूपमा प्रश्न तपाईं कुराहरू नै राख्न भुक्तानी गर्न तयार हुनुहुन्छ कति तल आउँछ. मलाई लागि, यो बाहिर जान्छ कि आंकडा एकदम उच्च गरेको.
लामो-हराएका भ्यान Gogh चित्रकला एम्स्टर्डम मा अनावरण
Angelina र ब्राड गरेको बच्चाहरू W मा एक दिन छ ...
अमेजन घोषणा Ebook मिलान सेवा
आफ्नो स्मार्टफोनको मा गर्न सात ठूला कुराहरू
22403	4 एलेक्स Hern, एप्पल, लेख, कम्प्यूटिंग, विशेषताहरु, इन्टरनेट, ल्याप्टप, माइक्रोसफ्ट, प्रविधि, बेलायत प्रौद्योगिकी
← OnePlus 3T समीक्षा nintendo स्विच: हामी नयाँ कन्सोल के अपेक्षा गरिएको छ हुनुहुन्छ →
उत्कृष्ट स्मार्ट सुरक्षा क्यामेरा [भिडियो]
छ को सर्वश्रेष्ठ शोर-रद्द हेडफोनको को
सम्मान 10 समिक्षा
Movavi भिडियो सम्पादक: आफ्नो सबै भिडियो सम्पादन आवश्यकताहरू जवाफ
OnePlus 6: सबै ग्लास, बडा पर्दा